Namuhla, ezikrinini ithelevishini Russian avame movie ne izigcawu karate futhi karate. Futhi uma ngaphambi umbukeli wayebheke omkhulu wamabhayisikobho ashisa izikhotha American ukubuka, eminyakeni yamuva abantu ngokuya ephendukela ebhayisikobho Soviet. Kukhona amabhayisikobho amaningi lapho udlala Vladislav Demin - umlingisi, umongameli we-Karate Federation of ukulwa bengahlomile futhi Krasnoyarsk Territory. La mafilimu hhayi kuphela ezimatasa, kodwa futhi embule izinselele besikhathi sethu. Ngubani umlingisi abanamakhono ngempela?
Lo mlingisi esizayo wazalwa ekupheleni June 1974 emndenini elula Russian abahlala kule Krasnoyarsk Territory, e Nazarovo. Umndeni wawuhlala ehostela, futhi ngemva ukubukeka ingane yesibili, yena sathuthela efulethini entsha. Nge ukuhanjiswa abazali babo le nsizwa waqala ukudlala imidlalo. Kwakuhlangene ngaphezulu neqiniso lokuthi umuzi wabo kwaba Akusangifanele kwamanye amakilasi. Ngakho-ke, lo msubathi abasha sonke isikhathi sakhe enikelwe belungiselela tournaments kanye imincintiswano.
Esikoleni, Vladislav Demin, ogama Filmography ugcwele amabhande ezimatasa, benza yokuzijwayeza kanye acrobatics. Ngemva nje kancane kwalokho, le nsizwa iqala ukuba ahileleke isibhakela kanye karate, iqhaza imincintiswano ehlukahlukene.
Lapho Nazarovo weza Wushu master, noPrince Vlad ngokushesha babhaliswa kuye e Amazing. Kakade eminyakeni elitjhumi nahlanu kuthatha indawo yesibili e umncintiswano Wushu futhi iba umfundi engcono.
Kodwa le nsizwa phambi wayengazange kuhlelwe ukuthi ube umsubathi professional, wayekwenza karate ngenxa yokuthuthukisa idatha zabo ezingokwenyama.
Ngemva kokuqeda isikole Vladislav Demin eya Pedagogical Institute e-Faculty ukuqeqeshwa ngokomzimba, ngoba wacabangisisa Umqeqeshi career. Njengoba umfundi, wahlanganyela imincintiswano empini kungahlonyiwe, isibhakela futhi isibhakela sokukhahlela. Ngo-1996, umlingisi esizayo babenezinkinga ikarati inhlangano futhi ukulwa kungahlonyiwe, Krasnodar Territory. Ithimba lakhe wayebhekwa njengoba best eRussia, okuyiwona wathola isimo "kusho umengameli zokuhlonipha".
Ngo-1997, umlingisi ngangena kwezombusazwe. Uba yilungu Legislative Assembly of Krasnoyarsk Krai, ilungu Ezemidlalo Commission. Futhi ngo-1999 - iphini we the Liberal Democratic Party, lapho ayesebenza khona iminyaka emine ilungu State Duma eKomidi umkhakha nokwakhiwa, kanye nokuqapha isabelomali imali ngoba ezokuvikela we Russian Federation kazwelonke.
Ngisho nalapho ngiseyingane Demin Vladislav Anatolevich uyakuthanda ebhayisikobho. Wayethanda ukubuka ama-movie ne Van Damme futhi Bruce Lee. Lapho eshiya nyakenye ukuhlala isimo iphini, Vladislav wakhetha yaseshashalazini kanye cinema, ucabangela ukuba yaba umsebenzi wokuphila kwabo. Ngesikhathi wabhalisa inkambo nokwenza, kodwa bebonile ukuthi wayefuna ukuba uchwepheshe kulo ibhizinisi. Khona-ke lo umlingisi esilandelayo sigxila ekuboniseni amakhono akho kwezemidlalo kanye karate, kokunquma uwasebenzise movie.
Ngo-2002, ukudala ividiyo lapho waziveza njengoba leli sosha ephelele, womzimba, umcibisholo, nokunye, umlingisi ithumela yona umkhiqizi American. Kodwa indima movie Hollywood lingenyuswanga, nakuba wamukelwa ngonyaka Russian TV ewuchungechunge "Fighter", okwathi ngokuhamba kwesikhathi waqaphela njengoba best ashisa izikhotha Russian.
Ngemva kwalokho uVlad ahlinzekwa izindima nesekelayo ezihlukahlukene ewuchungechunge yethelevishini futhi ngo-2007 efika indima esemqoka ochungechungeni "Guys Good".
Ngemva kwalokho, le umlingisi enquma ukungena GITIS, ukuba abe okhokhelwayo. Wathweswa iziqu ngayo honours ngo-2011. Nakuba usengumfundi, Demin inendima enkulu e "SWAT" chungechunge.
Vladislav Demin. Filmography
Demin umlingisi manje ethandwa kakhulu nama-movie yakhe eningi abantu ukubukela. Wabe esenza uchungechunge TV sici sobude amafilimu, ukudlala njengoba indima eyinhloko noma lesibili. Lo mlingisi kumafilimu afana nokuthi: "Fighter" (2004), "u-Ana" (2005), "aphonswe" (2005), "Chief osezingeni" (2006), "Jail. Feodor Sechenov Case "(2006)," Panther "(2007)," Fighter. Ukuzalwa legend "(2008)," Guys Elihle "(2008). amafilimu abathandwayo futhi ezifana ne Vladislav Demin, "Inzondo" (2008), "SWAT" (2010), "i-Comrades amaphoyisa" (2011), "Jarhead" (2011), "ukwehluleka namanenekazi. Lokubulala "(2011)," izixazululo angajwayelekile. Lokubulala "(2011)," Okwesithathu. Lokubulala "(2011)," Isosha "(2012)," Brigade. Indlalifa "(2012)," Bretor "(2013)," 22 Minutes '(2013).
Ngokusobala, le umlingisi ukudubula ngaphezulu ochungechungeni, kodwa futhi sici amafilimu umdlalo wakhe akukanciphi ezithakazelisayo.
Vladislav Demin, izithombe zazo ozijwayele noma ubani ayehlangana naye ngo-2009 u-Angela, futhi ngemva konyaka wonke abahlala ndawonye, bashada. Umehluko yobudala akuvimbeli intsha ukuba ujabule. Ngo-2011, lo mbhangqwana waba intombazane owayebalwa Dasha.
Abantu abasha akuvamile ukubona ukukhanya, wakhetha ukuphila komkhaya ethule. Yini eyaziwayo wukuthi zonke izenzakalo ezibalulekile ezenzeka emkhayeni, umlingisi amanothi ku isethi. Ngakho kwaba lapho kuzalwa indodakazi yabo.
umlingisi Olumangalisayo Vladislav Demin uvele Russian ifilimu umkhakha muva nje, kodwa uye wakwazi ukunqoba izinhliziyo zabantu abaningi. Manje has a lot of abalandeli, bamemeze Thixo zabo "Schwarzenegger Russian". ukuqhathanisa okunjalo kahle kakhulu umculi osemusha, ngoba eqinile, okusheshayo, ngesihluku futhi abanamakhono kakhulu. Zonke lezi zimfanelo zibenza umlingisi ovelele e wesimanje cinema Russian. Ngo-2012, yena yanikezelwa Award Izithameli ngeqhaza Isihloko ifilimu "Labo round ozalwa abafi sikwele."
Abalandeli njalo elinde amafilimu amasha nge iqhaza lakhe, labo ezembula izinkinga zamanje, okubonisa uhlangothi oluhlukile lokuphila.
Manje Demin oluxhunywe esigxotsheni ngentambo umlingisi serial ngubani inkanyezi kule amafilimu ubugebengu. Nokho yena udlala indima abasubathi, ezempi kanye nabasebenzi Interior Senkonzo.
Okwamanje Vlad asebenzayo kumafilimu. Manje usebenza ifilimu "amabili imizuzu," okuyinto maduzane.
Vlad namuhla - kuyinto umlingisi hhayi kuphela onekhono, kodwa futhi engumyeni onothando nobaba. Zonke isikhathi sami Vladislav Demin uchitha nomkhaya wakhe. Ebusuku amaqembu kanye emaphathini ke ingabonakali njengoba ukuphila kwakhe siqu umlingisi akusho ababukisa ngakho.
Ungakhohlwa umlingisi abasha kanye nezemidlalo, ngenkuthalo uyaqhubeka kanzima, nokugcina ukufaneleka kwakho.
umlingisi Ukuthembisa elinde ama-movie amasha nemisebenzi. Kunethemba lokuthi umsebenzi wakhe uzoqhubeka, futhi silindele eziningi amabhayisikobho kanye iqhaza lakhe.
Izimiso eziyisisekelo womnotho emakethe